Fiara 3 indray nofaohin’ilay 4×4 : niharan-doza ny ben’ny Tanànan’Ivato sy ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety | NewsMada
Fiara 3 indray nofaohin’ilay 4×4 : niharan-doza ny ben’ny Tanànan’Ivato sy ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety
Nahitsy ny fanambaran’ny filohan’ny mpanolotsain’ny kaominina Ivato, amin’ny fanararaotam-pahefana ataon’ireo « sécurité civile » sasany. Anisan’izany ny nataon’ity fiara 4X4, izay nifaoka fiara telo, ka nahavoa ny ben’ny Tanànan’Ivato sy ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety, teny Imerinafovoany, afakomaly alina ity.
Naratra mafy teo amin’ny tratrany ary mbola manaraka fitsaboana Randrianarisoa Penjy, efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy kosa, ny lehiben’ny holafitry ny mpanao gazety, Rakotonirina Gérard, ary efa nahazo nody. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo ireto mpanao gazety roa lahy ireto, teny Ambohibao ny alatsinainy alina teo, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina. Araka ny fanazavana, nofaohin’ny fiara 4×4 an’ireny mpiambina sivily ireny ny fiaran’izy ireo. Mafy ny fifandonana, satria voa teo amin’ny handriny ny filohan’ny holafitra, raha nisy tapaka kosa ny an’i Penjy namily ny fiara. Voalaza fa nandeha mafy ireo mpiambina sivily ary tsy nahafehy ny familiana nifaoka ny fiara nandehanan’izy roa lahy. Nanamafy ny nahita ity loza ity fa toy ny nisetrasetra mihitsy ireo nandeha fiara 4×4 ary efa fomba fanaon’izy ireo izany. « Efa fanaon’ireo mihitsy ity fomba mandeha mafy mampaneno anjombona ity. Nisongona fiara ary nangalatra lalana io fiara 4×4 io. Nisy naratra koa tao amin’izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny avy amin’ny holafitra.
Araka ny filazan’ny olona eny an-toerana ihany koa, matetika loatra ny fandehanana mafy eny amin’iny lalana Ambohibao iny, ary miseho lava ny loza. Noho ny lalana malalaka mihazo an’i Talatamaty sy Ivato iny mampandeha mafy ny fiara. Ny sasany no voatery mandefitra raha tsy te ahita loza tahaka ity nahazo ireo mpanao gazety roa lahy.
Araka ny fanazavan’ny lefitry ny ben’ny Tanàna Ivato, izay nasiaka tamin’ity loza ity ny fanaparam-pahefana ataon’ny sasany, toy ity fiara 4×4 ity. Matetika manararao-pahefana ireny manana jiro manga ireny amin’ny fandehanana amin’ny arabe. Mampaneno anjombona mandeha mafy, kanjo mamoa-doza, toy ity farany sy fiara mpitondra marary farany. Tsy lazaina intsony ireo mpiambina olona ambony niharan-doza toy ny teny Ambandia, sns. Misy ihany koa ireo olon-tsotra manana asa hafa mihitsy manana zo ampiasa ireny jiro manga ireny indraindray.
Inona ny lalàna mifanaraka amin’ny fampiasana ireny jiro manga ireny? Toy inona ny fampiasana sy afaka mampiasa azy? Nisy fotoana niresahana kely an’io ihany avy amin’ny polisy, saingy hadinodino teny ny resaka. Fotoana tokony hamerenana azy izao.